समीक्षा र भविष्यवाणी | Martech Zone
सोमबार, डिसेम्बर 18, 2006 बिहीबार, जुन 11, 2009 Douglas Karr
ProBlogger अर्को शानदार समूह लेखन परियोजना छ। (तपाईं पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ!)
डारेन धेरै ब्लगिंग को लागी एक व्यक्तिगत कोच को जस्तै छ। विरलै मैले एक पोष्ट देख्दछु ProBlogger त्यो पूर्ण रूपमा वास्तविक छैन। मलाई लाग्छ डारेनले ईन्टरनेटमा ब्लगहरू अझ राम्रो बनाउनको लागि असाधारण प्रयास गर्दछ।
यो समूह लेखन प्रोजेक्ट एक रचनात्मक सूची, रेन्ट, आदि गत वर्षको लागि समीक्षा वा आउँदो बर्षको लागि भविष्यवाणीहरूको साथ आउने छ। मैले अलि रचनात्मक हुने र दुबैको संयोजनको प्रयास गर्ने निर्णय गरें। तल तपाईले मेरो व्यक्तिगत समीक्षा भेट्टाउनुहुनेछ २०० 2006 मा के महान थियो र मेरो विचारहरू के २०० 2007 मा महान हुनेछ। मेरो आँखा २०० Keep को भविष्यवाणीमा राख्नुहोस्, मलाई लाग्छ कि मैले विभिन्न क्षेत्रहरू कागजातमा राम्रा राम्रा कार्यहरू गरें मेरो ब्ल्गले छुन्छ र प्रत्येक शीर्षकको विषय लिइरहेको दिशाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्दछ।
रमाईलो गर्नुहोस्! जहिले पनि, टिप्पणीहरूलाई स्वागत छ। र ट्र्याक राख्न निश्चित गर्नुहोस् ProBlogger त्यसोभए तपाईं सबैले के लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
२०० in मा महान
अझै सुरूवात गर्न
कम्प्युटर ओएस मोड्स
XP का साथ इंटेल म्याक
OSX को साथ इंटेल पीसी
एकीकृत रणनीति w / ईमेल वेब
अनुप्रयोग सेवा प्रदायकहरु
नेट मार्फत ग्राहक-सर्भर
भर्चुअल डोमेन सर्भरहरू
डिसे 19, 2006 मा 1: 23 AM
म तपाइँका धेरै जसो भविष्यवाणीहरू डगसँग मन्जुर गर्छु, यद्यपि मैले जूनले मिडिया प्लेयर बजारमा धेरै प्रभाव पार्दै गरेको देख्दिन। मैले समूह लेखन परियोजनाको लागि आफ्नै भविष्यवाणीहरूको सूची लेखें।
तपाईको अन्तिम भविष्यवाणीको साथ शुभकामना छ 🙂
डिसे 19, 2006 मा 9: 44 AM
म निश्चित रूपमा Zune मा एक अंग मा बाहिर गए! विशेष गरी भर्खर क्रिसमसको लागि मेरा बच्चाहरूको लागि केहि आईपडहरू किन्नु। यो मेरो लामो शट हो।
भाग्य को लागी धन्यवाद, मलाई यो चाहिन्छ! कुनै ठूलो हेर्ने २-25--30० वर्ष पुरानो करोडपति पूर्व-मोडेलहरू जान्दछन् जसले ठूला एकल ड्याडहरूलाई प्रेम गर्दछन् जुन उनीहरूको सबै खाली समयमा ब्लग गर्न मन पराउँछन्?
डिसे 19, 2006 मा 11: 30 AM
होईन, तर यदि मैले कुनै कुरा फेला पारे, म तिनीहरूलाई तपाईंको मार्ग पठाउने कुरामा निश्चित छु 🙂
डिसेम्बर १, २०१ 19 2006:२:12 अपराह्न
ओह, भविष्यवाणीहरू पोस्ट गर्ने कस्तो राम्रो तरिका हो, मलाई यो मनपर्दछ! सीमाहरूले मूल्यमा तल झर्नु पर्छ र अधिक अनलाइन विकल्पहरू प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ, अमेजन जस्ता प्रयोग गरिएको मार्केटप्लेस सेक्शन सहित, कि नजिकै आएको छु।
हामी पनि यस परियोजनामा ​​भाग लियौं, द्वारा रोक्नुहोस् यदि तपाईंले मौका पाउनुभयो!
डिसेम्बर १, २०१ 19 2006:२:9 अपराह्न
एउटा उत्तम तुलना मैले अहिले सम्म देखेको थिएँ र राम्रो भविष्यवाणी। तपाईंको ब्लग अब हेरिएको छ।
मैले पनि तीस प्रतिस्पर्धामा भाग लिएँ। केवल ड्यारेनलाई यसको अर्को पोस्टमा राख्नको लागि प्रतिक्षा गर्दै थिए
म तपाइँको ब्लग खुवाउँदै छु
धन्यबाद, मामा डक! धन्यबाद आशिष!
डिसेम्बर १, २०१ 19 2006:२:10 अपराह्न
2007 check को अन्त्यमा यो सूची जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्
डिसे 20, 2006 मा 12: 00 AM
तपाईंले मलाई सम्झाउनु पर्छ। मेरो मेमोरी त्यति लामो हुँदैन। 😉
डिसे 20, 2006 मा 7: 00 AM
राम्रो भविष्यवाणी मानिस… र उत्तम ब्लग ..
डिसे 20, 2006 मा 10: 21 AM
धन्यवाद, मधुर! त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रियाले मलाई निरन्तरता दिइरहेको छ!
डिसे 21, 2006 मा 10: 26 AM
भविष्यवाणी गर्न जानको लागि राम्रो तरिका।
फराकिलो मोनिटरहरू - हो, पहिले नै यो देख्दै।
Zune - Hmmm, म एक किन्नको टिपिंग पोइन्टमा छु।
डिसेम्बर १, २०१ 28 2006:२:3 अपराह्न
मजा OSX द्वारा विन्डोज XP बाहिर सारियो जस्तै, आइपड Zunes द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ कि हेर्न मजा।
वास्तवमै पहिलो कुरा हुँदैछ भनेर देख्न सक्नुहुन्न (र कुनै पनि दरमा यति चाँडो छैन), तर निश्चित रूपमा दोस्रो साँचोको लागि आशा गर्दछ।
(हे, यसको मतलब यो हुन्छ कि सबै पीसी मालिकहरूले आइपडको साथ अब एक IntelMac पाउनेछ र यसलाई केही माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयरको साथ समक्रमण गर्दछ? Hm…)